HAADHA IJA TAKKAA-Seenaa Garaa nama moogessuufi nama barsiisu – Beekan Guluma Erena
HAADHA IJA TAKKAA-Seenaa Garaa nama moogessuufi nama barsiisu	Beekan Guluma Erena
Asoosama May 10, 2016OROMOO
HAADHA IJA TAKKAA-Seenaa Garaa nama moogessuufi nama barsiisu
Harmeen too ija tokko qofa qabdi, ijji ishee tokko guutumaan guututti hin agartu. Adaduma guddachaa, ofbaraa dhufeen, waa’en ija ishee kun na yaaddessuu eegale. Keessattuu mana barumsaa keessatti ishee waliin mul’achuun na qaanessuu eegale. Yeroo hiriyoonni koo mana barumsaa harmeetoo ilaalan, daddafanii ija isaanii irraa garagalfatu, kanneen kolfanii walitti hasaasanis ni jiru. Yeroo kanatti ani baay’ee tokkon qaana’a.
Harmeen koo nama garmalee cimtuu na guddifachuuf jecha hojii lama hojjattuudha. Boqonnaa waan jedhameen wal hin beektu jechuu nan danda’a. Ani garuu sababa ijji ishee tokko baddeef ( ballaa taatef) qofa tasumayyuu ishee waliin mul’achuu hin barbaadu.
Yeroo harmeen too na daawwachuuf gara mana barumsaa dhuftu hundaa daddaftee akka deebitu qalbiin koo na kajeelti. Qalbiin too waan gaarii haarmee koof hin yaaddu. Suuta suutan haalli koo kun akkan daran harmee too jibbu na taasise. Namittiin kun kan nama hunda natti kofalchiiste jedhee yaada ~ inumayyuu guyyaa tokko ~ harmee too bar ani akkanatti si faana saalfataa jiraachurra osoo duutee naaf wayya jedheen. Yeroo kanatti ani Ilaalcha koo malee isheetti maaltu akka itti dhagayamu xinxallaa keessa galchee hin beeku.
Akkuma barumsa fixeen harmee too irraa fagaachudhaaf carraa gaarii hojii argadhe. Harmee too ittiin salafadhu sanarraa fagaachuu kootin gammachuun natti dhagayame. Niitii fuudhee jireenya mataa kootii gaggeessuu eegale. Yeroo muraasa booda ilmas argadhee xiyyeeffannaa koo guutuu anaafii maatii koo qofa irratti godhadhe. Waa’ee harmee kootii tasumayyuu yaadachuu guutumaan guututti dhiise.
Akkuma ajaa’ibaa guyyaa tokko harmeen too osoo ani hin yaadin na daawwachuuf eddoo ani jiru iyyaafattee dhufte. Ilmaan tiyyaafi haati manaa kootis harmee too ijji takkittiin ballaa arginaan baay’ee sodaatan. Anis harmeen too osoo natti hin himin gara mana kootii dhufuu isheetin baay’en aare. Itti iyyee, lammata akka mana kootti deebitee anaafi maatii kootis hin jeeqne itti himee ofirraa ari’e. Harmeen koo garuu suutuma dhiifama na gaafattee jechuma tokkos osoo hin darbatin na biraa deemte.
Erga waggaa heddu tureen booda barattoota duraan kutaa 12 waliin xumurre irraa xalayaan affeerraa sagantaa walitti deebii naa ergame. Sagantaa kanarratti hiriyoonni waliin baranne kan eddoo gargaraatti faffaca’an hunduu ni argamu. Sagantaa kanarratti argamuuf anis imala koo gara eddoo dhaloota koo, gara naannoo harmeen too jirtuu qajeele. Yeroo achi gayee mana keenna duraanii sana dhaqu namni tokkochuu mana hin jiru ture. Maaltu maal ta’e jedhee warra ollaa wayta gaafadhu harmeen too du’aan boqatuu isii naaf himan.
Anaafis xalayaa barreessitee akka lafa keette natti himanii xalayicha natti kennan…..!
Xalayichi ariitidhaan banee dubbisuu eegale:::
Xalayichi akkana jedha!
Yaa Ilmoo Koo….
Xalayaa gabaabduu tana dhiifama guddaa si gaafachuudhaan eegala. Hayyama kee malee eddoo ati jirtutti mana kee dhufee ilmaanifii haadha manaa kee rifachiisuu kootif dhiifama naa godhi. Harmee ati akka malee ittiin qaanyoftu ta’uu koo osoon beekuu mana ati nagayaafi gammachuudhaan keessa jiraattutti sitti dhufee si qaanyessuu kootif dhiifama naaf godhi. Ani Ilmoo koo gadaamessa koo keessaa baate, si yaade jennaan ijumaanan si arga jedhee dhufe malee mana jeequf kaayyeffadhee hin turre.
Yeroo dheeraadhaan booda barattoota duraan waliin barattan waliin wal arguuf sagantaa akka qabdan dhagaye. Haala fayyaa kootii yoon ilaalu Adduunyaa tanarraa baay’ee waan turu natti hin fakkaatu. Kanaafuu, har’a mudannoo wayta ijoollummaa keetii si mudate tokko sitti himuun koo dirqama tayee natti mul’ata.
Ilaali Ilmoo koo ~ wayta ijoollummaa keetii guyyaa tokko osoo karaa irra kubbaa taphattu balaan konkolaataa si qaqqabee ture. Balaa sanaan ijji kee tokko guutumaan guututti si baddee hojiin ala taate. Anis baay’en rifadhe, wayta guddattu najalaa waan yaaddoftuuf, waan sitti dhagayamuuf jedhee baay’ee dhiphadhe. Gaarifii toltuu adduunyaa tanarra jirtu akka sirritti daawwattuuf jecha ija koo tokko baasisee siif kenne. Ani akka ati yaadaa turte san jaamtuu hin turre. Haata’uu garuu ofirra dabarsee ija koo siif laadhe, siif jecha of jaamsee ija kee ganamaan si baddee turte siif bakka buuse.
Ani yoomuu taanaan jaalala daangaa hin qabne kan onnee qulqulluu irraa madditen siif qaba. Ija koo baasisee siif kennuu kootin guyyaa tokkos gaabbee hin beeku. Jireenya lafarraa tana guutumaan guututti akka dhandhamtuuf waan danda’u godhuu kootiif baay’een itti gammada.
Baay’en Si Jalaadha✍
Hiwi Elonaatin ~ Ebla 09/2016
← Ana Mukni Qottoo-Sabboontuu Jimmaatii’n -Deebii Walaloo Beekan Gulummaaf kenname!!
MIILLIKE SIHAABAASU!—Afoola keessaniin Bohaaraa →